श्रीमतीलाई अँध्यारोमा अर्कैले किस खाएपछि… – Allindiabc
August 9, 2019 by allindiabc
श्रीमान् श्रीमती एउटा पार्टीमा गएका थिए ।संगीतको धुनमा मोजमस्ती चलिरहेको थियो ।अचानक लोडसेडिङ भयो । जेनेटरले झट्ट काम नगरेको हँदा बत्ती ५ मिनेटसम्म गयो ।
बत्ती आएपछि;- श्रीमान :यतिका बेरसम्म बत्ती नआउने भन्ने थाहा भएको भए एउटा दह्रो किस खाने थिएँ नि तिमीलाई श्रीमती(तीनछक्क पर्दै) ; लौ जा ! उसो भए अँध्यारोमा को थियो त त्यो?
Prevआर्मी स्टाइलमा छोटो कपाल काटेको पुरुष एकदमै मन पर्छ” एलिसा राई
Nextखुट्टाको औला हेरेर यसरि थाहा पाउनुहोस कसको चरित्र कस्तो हुन्छ ?